Hazakaza-piarakodia :: Sambany hampiantrano Slalom ny tanànan’Antsirabe • AoRaha
Hazakaza-piarakodia Sambany hampiantrano Slalom ny tanànan’Antsirabe
Hitsapa ny fitiavan’ny mponina any Antsirabe ny hazakaza-piarakodia ny klioba Team 110 AS. Hampiantrano voalohany ny dingan’ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara, taranja fanamoriana fiarakodia sokajy Slalom, ny renivohitry ny faritra Vakinankaratra, amin’ny 9 – 10 mey ho avy izao.
Sambany no hisy an’ity karazana hazakaza-piarakodia ity any an-toerana, raha efa nandalo tany ny sokajy “Rallye”, nandritra ny taona maro nifandimby. Hanamarika ny dingana faharoan’ny fifaninanam-pirenena io hetsika io.
“Teto Antananarivo hatrany no nanaovana ny fifaninanana Slalom, hatramin’izay. Mikasa ny hanaparitaka izany any amin’ny faritra hafa ihany koa izahay ary hitondra zava-baovao hatrany”, hoy Rakotonjanahary Patrick na i “No Limit”, filohan’ny klioba Team 110 AS. Manana maha izy azy eo amin’ny taranja fanatanjahantena mekanika ny lehilahy satria sady mpitantana ihany koa ny Bira Moto Club. Tamin’ny taon-dasa no namoronana ny Team 110 AS. Ity no hetsika goavana voalohany raisin’izy ireo eo amin’ny tontolon’ny hazakaza-piarakodia.
Hisy dingana enina ny fifaninanana manamory fiarakodia sokajy Slalom, amin’ity taom-pihazakazahana ity. Raha noharina tamin’ny taon-dasa dia nihena izany satria nisy dingana fito tamin’ny taona 2019. Na izany aza, mbola fandaharam-potoana vonjimaika izany. Andrasana ny fankatoavan’ny federasiona malagasin’ny hazakaza-piarakodia.
Volley “Block Out Tournament” :: Raikitra ny fifaninanana ho an’ireo sekoly ambony
« Alin’ny haiady III » :: Voaasa ireo mpikambana avy any amin’ny tempolin’iy Shaolin